Ikhaya / Umklamo wangaphakathi / Amathiphu Wakho Okuthenga Ompompi Abalungile
2020 / 11 / 16 UkwahlukanisaUmklamo wangaphakathi 3515 0
Ebekwe kusinki, kusetshenziswa umpompi ukuheha amanzi ompompi. Ngaphambi kokuthenga ompompi, ngaphezu kwalokho kubalulekile ukuhlola indlu yokugezela. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zompompi ezitholakalayo ezidayiswayo. Ukufuna ompompi akuwona umsebenzi olula. Lapho ukubukeka nesitayela kubalulekile, umuntu kufanele agxile ekusebenzeni nasekuqineni. Phakathi kwezinto eziyinhloko ukuthi uzothola izinketho eziningi kakhulu, kuba nzima ukuthola okuphelele okufakwe kulokhu. Kuthulwe konke emakethe izici eziningi ezingcono nezishintshiwe. Abantu abaningi bakhetha izinto ezinophawu ngoba baqinisekisa insizakalo enhle nokuqinisekiswa kwempilo yonke.
Ukugcina inkinga kanye nokunambitheka okuhle kakhulu engqondweni, nazi ezinye izeluleko zokuthenga okulungile thenga ompompi online:
Ukusetshenziswa kwemali kwesokudla- Ukuthenga ompompi ababiza kakhulu ngeke kuqinisekise isiqinisekiso sempilo yakho yonke yalokho. Udinga ukukhetha isabelomali ekuqaleni. Qiniseka ukuthi izici ezengeziwe ezisebenzayo zifakiwe nosinki ofisa ukuthenga. Kunezici ezithile ezidinga ukucatshangelwa njengenani lezimbobo ngaphakathi kwesinki sakho sasekhishini, ukuphakama kwesikhala njll.
Ungaweli ngenxa yokuvela kuphela- Kuyisinqumo esingalungile ukukhetha ompompi wakho wokukhipha noma wokugezela obikezelwe ekubukekeni kwawo. Ngenkathi kuqinisile okuvelayo kubalulekile, kunezinye izinto ezidinga ukucatshangelwa ngenkathi kuseshwa umpompi ofanele. Ungayekethisi ngekhwalithi, intengo noma ukuqina kokubukeka. Kungcono ukuthatha izeluleko zabakhiqizi abangochwepheshe ezinkampanini ezaziwayo njengeBathcare.in. Bangakusiza ukhethe ukuthi yikuphi okungcono kakhulu kwendlu yakho. Ungahlola i-Viewpoint cock 2 ku-1 noma i-Swan-neck kusuka kusayithi labo.
Izimbobo zokucwila- Mhlawumbe wake waqaphela ukuthi usinki wakho unezimbobo ezingaki? Uma kungenjalo-ke lesi yisikhathi. Ukuze ukhethe ompompi ofanele, udinga ukucabanga ukuthi uphumile. Imvamisa, amasinki amaningi anezimbobo ezintathu kuwo. Kungcono ukhethe usinki wesibambo esisodwa ofakwe nesitsha sokumboza ukufihla izimbobo zensalela. Kulula kakhulu kumuntu futhi. Futhi kufanele kuchazwe ukuthi ompompi abathile basekhishini banesiphathi sensipho esifakiwe ukuvala umgodi wokufafaza ongenalutho. Ngibhekabheka ompompi bakwaBrizo ukuze uthole okungcono kakhulu okuthengiswayo.
Yiba wusizo- Noma kuyiqiniso ukuthi ukubhekana kabili ngompompi kunesitayela futhi kuzofanela izinhlobo eziningi zokugezela, umuntu kufanele alingane nomthethosivivinywa. Izinzuzo ezingeziwe zifaka kuphela isibambo esisodwa. Amane nje, ngokungangabazeki, alula kakhulu ngoba kulula kakhulu ukuguqula amazinga okushisa kwamanzi ezimweni ezinjengalezi futhi ngesibambo esisodwa kuphela kuba lula ukuwahlanza.
Gwema ukuvuza- Ngokuvamile, i-sprayer eseceleni ifaka izingqinamba zokudonsa nokuvuza. Akekho odinga usinki ovuzayo. Hhayi nje ukulimaza usinki, kepha futhi ngaphezu kwalokho akukuhle kulo lonke uhlelo lwamapayipi endlu oluthinta ukuthi uthinte noma usinki othile uxhunyiwe. Okudumile, ama-sprayers okudonsela phansi akhonjiswa ethembekile futhi esebenziseka ukwedlula amanye. Zisiza ukuvimbela ukuvuza futhi zihambe isikhathi eside.
Ukuqeda usinki- Ngenkathi uthenga ompompi, kubalulekile futhi ukuqaphela ukuqeda. Kubalulekile ekubukeni nasekusebenzeni. Njengamanje, ochwepheshe bakhombisa ukuthola ompompi nge-chrome ephetha. Kulula ukuyihlanza futhi itholakale ezindaweni zentengiso. Ngokwethembeka kwesikhathi eside, ompompi abenziwe nge-chrome baphelele. Ngempela ingubo enzima ezovimbela ukuklwebheka kanye nezigxivizo zeminwe.
Khetha ama-valve ka-ceramic ompompi abanama-valve e-ceramic konke ukuconsa okungadingeki nokuvuza. Namuhla, wonke ama-valve anokwethenjelwa kepha ama-ceramic anikeza isithembiso sempilo yonke. Into ebaluleke kunazo zonke ukuthi izindleko zamaphayiphu e-ceramic zicishe zifane nezinye.
IBathcare.in ngomunye wabakhiqizi bezinto zokugeza abaziwa kakhulu eDelhi endlini yangasese. Baqinisekisa ukuhlinzeka ngesipiliyoni esihle sokugeza kuwo wonke amakhasimende. Kusetshenziswa ubuchwepheshe obusha nobesimanje, iBathcare idume ngokuhlinzeka ngezinto ezibalulekile zangasese ezihehayo. Bheka ukukhetha kwabo okumangazayo ngentengo elungile ngaphandle kwengosi yabo eku-inthanethi.
Edlule :: Lena Incazelo Ephelele Ngetshe Le-Ultra-Thin! Olandelayo: Ubuciko Obungaphezulu Kokuphila: Hefei Izakaya Restaurant | Idizayini Ku-The Bund
2020 / 12 / 05 2071
2020 / 11 / 29 3009